Somaliland: Haweenka oo Rejo Weyn ka Qaba ka qayb-qaadashada Talada Dalka iyo Shuruudo ay Xisbiyada ku xidheen
Home Somali News Somaliland: Haweenka oo Rejo Weyn ka Qaba ka qayb-qaadashada Talada Dalka iyo...
Xildhibaan Baar Siciid oo ka tirsan golaha wakiilada Somaliland, ayaa sheegtay in wax weyni iska beddeleen fekerka bulshadu ka aamisanayd in haweenku ka muuqdaan goleyaasha qaranka, sidaa awgeedna ay rejo fiican ka qabaan inay si weyn uga qayb-qaataan doorashooyinka soo socda.
Xildhibaan Baar Siciid oo ah haweenayda keliya ee ka tirsan baalmaanka Somaliland, ayaa sheegtay in haweenka Somaliland ugu goodiyeen xisbiyada dalka haddii aanay taageerin inaanay wax cod ah ka heli doonin haweenka, taasina ay tahay rejada ugu weyn ee sii xoojinaysa hanka haweenka ee ka-qayb-qaadasha talada dalka
“Haweenku waxay ugu goodiyeen saddexda xisbi hadii aanay taageerin qorshaha in kuraas xadidan haweenku yeeshaan, aanu haweenku cod siin doonin,” ayey sheegtay Baar Siciid.
Warbixin wargeyska Inner press ka diyaariyey kaalinta haweenwaynaha Somaliland kaga jiraan siyaasada ayaa lagu sheegay in Baar Siciid tahay haweenayda keliya eek u jirta Wakiilada Somaliland, halka aanay golaha Guuritda ka maqan yihiin, dhinaca xukuumadana jiraan laba wasiir iyo laba wasiir-xigeen oo haween ah, balse taageerayaasha ayaa ku doodaya in xeer ballanqaadaya kootada kuraas u gaar ah haweenka la meelmariyo si farqiga jinsigu u yaraado.
“Cidna kuma siinayso sixni dahab ah cunto haweenka, xishoodkii hore wuu yaraaday, waxaan leenahay, hadaad doonaysid ciodkayga, iga kasbo,” ayey tidhi Adna Adan, ooh ore wasiirka Arrimaha Dibedda u noqotay, isla markaan aaasaastay cusbitaalka dhalmada Adna, oo si weyn ugu ololeeya qadiyadda haweenka iyo joojinta gudniinka.
Adna Adan ayaa sheegtay inay goobjoog u ahayd dodo xukuuamdau ka yeelatay haweenka sannadihii la soo dhaafay, oo baddi u muuqda ballanqaad siyaasadeed inay magacaabi doonaan jagooyin badan oo haweenka ah, isla markaana soo diyaarisay xeer kuraas cayiman gaar ugu xidhaya haweenka, balse laba xilli lagu guuldaraystay ka dib markii golaha wakiilada iyo Guurtida marba mid diiday.
Laakiin, Adna ayaa sheegtay inay aaminsan tahay in xilligan haweenku u dabran yihiin sidii ay uga midho dhalin lahaayeen ansixinta xeerka kootada, si weyna olalahoodu u socdo.
Kaalinta haweenak xilka haya ayaa isweydiin leh, maadama baddi labada reerba sheegtaan, reerka ay ka dhalatay iyo kuwa ay u dhaxday, taasoo baddi aan faa’iido u keenin.
“Hadii haweenay loo magacaabo wasiir, labada qoys (Dhaxdin iyo dhalasho) way sheegtaan, balse hadii ay taageero weydiisto, labada dhinacba way isku riixaan,” ayey sheegtay Nuura Jamaal Xuseen, oo u ololeysa kaalin haweenka ee siyaasada.
Maxamed Cali oo ka tirsan xildhibaanada Baarlamaanka, ayaa sheegay inuu taageero xeer kuraas cayiman u gaar yeelaya haweenka, balse mar la weydiiyey in haweenay u tartami karto xilka madaxweynenimo, waxuu sheegay in taasi ka horimanayso shareecada islaamka.
Inkastoo uu sheegay in fikirkiisu isbedeli karo mustaqbalka, balse dadka kale ku eedeyn karaan “qof aan aqoon u lahayn diintiisa,” haduu u ololeeyo in haweenay madaxweyne noqoto.
Aamina Faarax Caarshe, oo ganacsato ah ayaa sheegtay hadii fiiro gaar ah loo yeesho awoodsiinta dhaqaale ee haweenka, kaalintooda ka qeybgalka siyaasadeed iman karto.
“Waan necbahay xeerka kootada, waxaan doonayaa in haweenku la’aanteed codka isku huraan,” ayey sheegtay. “Laakiin, xaalada xilligan ma saamaxayso, markaa waa inaan dabakhnaa xeerka kootada.”
Somaliland: Maayirka Caasimada Hargaysa Oo Ka Hadlay Saameyntii Doorashada Iyo Shirkadaha Xashiishka